Melatariga Nigeria oo sheegay in ay dileen 16 katirsan kooxda Boko Xaraam – SBC
Melatariga Nigeria oo sheegay in ay dileen 16 katirsan kooxda Boko Xaraam
Posted by Webmaster on June 7, 2012 Comments
Abuja:- ciidanka melatriga Nigeria ayaa shaaca qaaday dhimashada 16 katirsan jamaacada Boko Xaraam ee Islaamiga ah dagaal ku dhexmaray mid kamid ah saldhigyada kooxda magaalada Maydoguuri ee woqooyi beri Nigeria.
Afhayeenka ciidanaka Colonel Viktor Ibhaalimi ayaa sheegay in ciidankiisa uu qaaday howlgalo melatari kadhan ah kooxda hubaysan Boko Xaraam kuwaasi oo isku dayey in ay weerararaan isgoysyada magaalada.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen xabado iyo qaraxyo goobo ay ku dhuumaaleysanayeen kooxo la’aaminsan yahay in ay kamid yihiin kooxda sheegatay inbadan weerarada iyo qaraxyada dalka Nigeria tan iyo 2009 taasi oo keentay dhimashada boqolaal qof.
Goobjooge ayaa sheegay in ugu yaraan sideed qarax laga maqlay deegaanka iska hor imaadka kadhacay xaafadda Luwaan Bokaar, halkaasi oo ay ciidamada Nigeria oo wehliyaan dabaabaadka ay u dhaqaaqeen islamarkaana ay qabsadeen.
Mid kamid ah dadka deegaanka Maydoguuri ayaa sheegay in magaalada oo laga aaminsan yahay xarunta jamaacada Boko Xaraam ay ka baxeen dadkii degnaa badankood kahor inta aysan bilaaban howlgalada ciidanka Nigeria.
Goobjooge ayaa sidoo kale sheegay in dad rayid ah ay kudhaawacmeen xabada wiiftada ah wadopoyinka magaalada.
Ciidanka Nigeria ayaa kugacan seeray in wax qasaare ah dhankooda soo gaaray islamarkaana waxa bayaan ka soo baxay ciidanka lagu sheegay in ay gacanta ku dhigeen hub iyo waxyaabaha qarxo inta lagu guda jirey baaritaano laga sameeyey guryaha.
Kkkk ilaah baa waxdila ee nina tawxiidkuu ku dhintaa nina gaala raacid